PressReader - Kwayedza: 2018-10-12 - Marimiro anokudza goho
Kwayedza - 2018-10-12 - Nhau Dzevarimi - Wendy Madzura Wendy Madzura mudhumeni kuSeed Co uye anobatika pa: 0713 270 080 kana 0773 270 080
1. Tanga nekuongorora nekugadzirisa ivhu.
Kuisa lime muvhu kunobatsira kuti ivhu risave nezvinokanganisa kukura kwembeu, zvinosanganisira aluminium nemanganese nekuti zvinovhiringa mashandiro emafetireza. Mafetireza akasashanda zvakanaka zvinokonzera kuti chibage chitadze kupa murimi goho repamusoro.
Kuisa lime muvhu kunovandudza chimiro chevhu zvoita kuti mbeu ibude zvakanaka, pova nemadzinde akawanda pandima (crop stand). Midzi inowedzera kukura zvichiita kuti mbeu ikwanise kutora mafetireza muvhu zviri nyore.
2. Tanga pamunda wakaitwa gadziriro yakakwana.
Kurima munda zvakakwana kwakakosha kana chibage chichirimwa zvekupa goho repamusoro uye zvine pundutso. Pakurima mbesadzosedzinomeranokubuda muvhu zvakanaka kana munda uchinge warimwa nemazvo. Kune nzira mbiri dzekurima:
3. Tanga nekusarudza mbeu yakanaka.
Chokwadi chiripo ndechekuti sarudzo yembeu yechibage ndiro donzo rokurima zvine pundutso. Zvakakosha kusarudza mbeu inopa goho repamusoro asi iine chipo chekuchengetedza goho kubva kumamiriro ekunze. Mbeu dzinoti Tsuro, Tsoko, Mbizi, Shumba neNzou dzakanaka zvikuru pakupa goho - chakakosha kusarudza inoenderana nemwaka uye nekwamunorimira muri.
4. Vavarira kuwana madzinde anokurudzirwa pandima aine mbesa yakamira zvakafanana.
Cherechedzai nekuona kuti michina ichashanda pakudyara yagadzirwa zvakakwana (calibration).
Pakushandisa michina, fambai zvinotendera kuti mbeu nefetireza zvinoiswa muvhu nemazvo. Kusiyana kwekumera kwembeu mumunda kunounza dambudziko rokuti mbeu inenge yapedzisira kumera haikurirani nedzimwe. Izvi zvinodzikisa goho.
Kune vanorimira kunzvimbo dzakakwirira uye vaine madiridziro, tinokurudzira madzinde ari pakati pe50 000 kusvika 60 000 kunyanya kubva kumbeu dziri mumhuri yeMbizi, Shumba neNzou. Kunzvimbo dzinonaya mvura shoma, tinokurudzira madzinde ari pakati pe37 000 kusvika 44 000 pahekita.
5. Huwandu hwekudya kwephosphorous:
Kukura kunoita mbeu mumunda kunoenderana nekuwanda kwechikafu chinokudza midzi (phosphorous). Kana kudya uku kuri kushoma, mbeu haikuri zvakanaka izvo zvinoderedza goho. Kumbeu yechibage kudya kunokudza midzi uku (phosphorous) kunodiwa nehuwandu huri pakati pe30 kusvika 50 mg/ kg. Kushanda kwephosphorous kunodyidzana nemamiriro evhu maringe nekuvava kana kutapira kwaro (pH). Huwandu hwephosphorous muvhu hunoonekwa mushure mekuriongororesa. Chokutanga murimi anofanira kuisa lime obva azoisa fetireza inowedzera kudya kwephosphorous yeSingle Super Phosphate SSP. Fetireza iyi inoda kurimirwa pasi kuti isangane nevhu mbeu isati yadyarwa.
6. Nguva yekudyara:
7. Kuuraya sora nekudzivirira twumbuyu:
Zvakakosha kutanga nemunda usina sora kunyanya kwemavhiki gumi kusvika pagumi maviri (10 – 12 weeks). Tinodaro nokuti apa ndipo panoshandiswa kudya kana kuti mafetireza mazhinji nembesa (60%). Panguva iyi zvakakosha kuti mbeu isave nesora nokuti rinokwikwidzana nembeu pakutora mafetireza nehunyoro muvhu. Kurudziroyedundeyekuti munda unofanira kugara usina sora pakukura kwembesa, izvi zvinoita kuti goho riwedzere.
Gonye remhando yefall army worm rakonzera dambudziko rakanyanya pakurima chibage, zvinove zvinodzorera shure donzvo kana kuti dingindira ratinaro rekukwidza goho rechibage nekuunza maguta kunyika. Varimi vanofanira kufamba mumunda pamazuva maviri kana matatu ega ega (scouting) kuti vaone kuti pane chinoda kugadziriswa here mumunda. Zvakakosha kuti varimi vashandise mishonga inokurudzirwananamazvikokoka vemishonga.
Kuti mbeu ibude zvakanaka, munda unofanirwa kurimwa zvemandorokwati.